जहाँ सडक त्यहाँ मधुमेह - Health Today Nepal
जहाँ सडक त्यहाँ मधुमेह
December 27th, 2019 बिशेषज्ञ लेख0comments
डा. ज्योति भट्टराई,
मधुमेहको प्रमुख कारणमध्ये अनियन्त्रित खानपान पनि एक हो । हामी एकै पटक थालभरि खान्छौ । कोचीकोची खान्छौ । हामीलाई लाग्छ, एक पटक खाए दिनभरिलाई पुग्यो । हामीमध्ये धेरैको घरमा खाना खाने थाल ठूला छन् । आफ्नो सजिलोका लागि केटाकेटीलाई जडफुडमै टार्ने गर्छौ । खाजा भनेकै चाउचाउ, कुरकुरे, लेजजस्तै तयारी खानेकुरालाई ठान्छौं ।
स्वास्थ्यका लागि भन्दा पनि जिब्रोको स्वाद र सजिलोलाई बढी ख्याल गर्छौं । यही अनियन्त्रित खानापानले मोटोपन बढिरहेको छ । सहरमा त अहिले दुब्ला मान्छे देख्न कम भइसके । सार्वजजिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा देख्न सकिन्छ, तीन जनाको सिटमा तीनजना अटाउनै मुस्किल परिरहेको हुन्छ । यही मोटोपनले उच्च रक्तचाप, श्वासप्रश्वास, मुटु, मिर्गौला रोग मात्र नभएर मधुमेह पनि ह्वात्तै बढाएको छ । मधुमेहले के बच्चा, के युवा र के प्रौढ कसैलाई पनि छोडेको छैन । पहिलेपहिले झाडापाखाला, हैजाजस्ता सरुवा रोगका कारण धेरै मानिसको ज्यान जान्थ्यो । अहिले ठीक उल्टो हुन थालेको छ । सरुवा भन्दा नसर्ने रोगको संक्रमणका कारण धेरैको ज्यान गइरहेको छ । सरुवा रोगको उपचार सस्तो हुन्छ । तर नसर्ने रोगको उपचार एकदमै महँगो हुन्छ । नसर्ने रोग लाग्नै नदिन हामी सबै स्वास्थ्यप्रति सचेत हुनु बपर्छ । विरामी भएपछि डाक्टर छँदैछन वा अस्पताल छँदैछन्नि भन्ने धारणा पालेर बस्नु हुँदैन । रोग लाग्न नदिन हामीले आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्नै पर्छ ।
यदि जीवनशैली परिवर्तन गर्न सकेनौं भने जतिबेला पनि ठूलठूला रोगको संक्रमण गर्ने निश्चित छ । जीवनशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने तरिका धेरै छन् । तीमध्ये एकै पटक धेरै खाने बानी छोड्नु पनि एक हो । थोरै भात खाऔं । दुई मुठी चामलको भातभन्दा बढी नखाऔं । त्यसमा पनि सकभर सेतो चामल कम गरांै । भातसँग दाल, सागसब्जी र सलाद खाऔ । एकै पटक धेरै खानुको सट्टा तीन— तीन घण्टाको फरकफरकमा खानु स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ । दिनमा पानी कम्तीमा चार लिटर पिऔं । मधुमेहबाट बच्न यही खानुपर्छ भन्ने छैन । थोरै थोरै खाने, चिल्लो कम भएको खाना खाने, सागपात फलफूल खाने, पानी बढी पिउने, दैनिक शारीरिक अभ्यास गर्नुगर्छ । जडफुडबाट भने बच्नै पर्छ । हिजोआज जहाँजहाँ सडक पुगेको छ, त्यहा मधुमेहका बिरामी बढी देखिन थालेका छन् । त्यसको एउटै कारण हो जडफुड । जहाँ सडक त्यहाँ मधुमेह छ अहिले । सहर नहुन्जेल मानिसहरू स्थानीय बजारमा गएर सागपात, तरकारी, फलफूल बेच्दथे । बारीमा उम्रिएको खान्थे । तर अहिले समय फेरिएको छ ।
सडक पुग्नु नराम्रो होइन । विकास हो । तर यसले ग्रामीण जीवनशैली बदलिदिएको छ । बाटो पुग्यो कित्यहाँ सबैभन्दा पहिले जङफुड पुग्छ । चाउचाउ, कुरकुरे, मुरमुरे पुग्छ । त्यही खान थाल्छन् बालबालिका ।फलफूल बेच्ने पसलेहरू अहिले जडफुड बेच्न थालेका छन् । स्थानीयवासी सागपात खान छोडेर तयारी वस्तु खान थालेका छन् । जसको परिणामस्वरूप सडक पुगेका बस्तीमा मधुमेहको प्रकोप बढिरहेको छ । तरकारी बेचेर चाउचाउ किनेर लैजाने महिला थुप्रै छन् । सहरमा पाइने अधिकांश तरकारीमा विषादी प्रयोग गरिएको हुन्छ । विषादी हालेको तरकारी खाने मानिसमा दुई गुना मधुमेह हुने सम्भावना हुन्छ । मधुमेहका विषयमा सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीसमेत पूर्ण जानकार छैनन् । उनीहरूलाई मधुमेहसम्बन्धी तालिम दिनुपर्छ । स्कुल वरिपरि तयारी खाना बेच्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।
मधुमेह सबै उमेरसमूहमा देखिएको छ । युवाअवस्थामै यो समस्याले सताउन थालेको पाइन्छ । केही समयपहिले धरानमा गरेको एक अध्ययनमा २० वर्ष उमेरसमूहका ७.५प्र तिशतमा मधुमेहको समस्या देखिएको छ । राजधानीमा त यो संख्या त्योभन्दा धेरै बढी छ । काठमाडौंमा गरिएको अर्को अध्ययनले २५ प्रतिशत मधुमेहलाई रोकथाम गर्न सकिने देखाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालसहित दक्षिण पूर्वी एसियाका मधुमेहको संक्रमण चार प्रतिशतबाट वृद्धि भएर ८.५ प्रतिशत पुगेको छ । दक्षिणपूर्वी एसियामा रगतमा अत्यधिक चिनीका कारण १० लाख मानिसको मृत्यु भएको थियो । जसमा मधुमेहको प्रत्यक्ष कारणका साथै मधुमेहको जटिलता र परिणामहरूजस्तै मिर्गौलाले काम नगर्ने, मुटुसम्बन्धी रोग र क्षयरोग छन् । मधुमेहको समयमै उपचार नगराउँदा जटिल समस्या आउँछन् । यसले आखा, मिर्गौला, मुटु र खुट्टामा समेत असर पर्छ । त्यसैले मधुमेहसहित अन्य नसर्ने रोगबाट बच्न आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्न जरुरी छ । (डा. भट्टराई इन्डोक्रानोलोजिस्ट एन्ड डाइबेटिज विशेषज्ञ हुन । )
Previous article दोश्रो मेडिकल टुरिजम एशिया समिट २०१९ राजधानीमा सुरु, महतोले गरे उद्घाटन
Next article पाँचौ एपी क्याट सम्मेलन आउदो मंसिर १६ देखि १८ सम्म चितवनमा हुने